Daacish oo Dagaalyahano horleh kusoo bandhigtay deegaano katirsan Puntland – Banaadir weyne
Daacish oo Dagaalyahano horleh kusoo bandhigtay deegaano katirsan Puntland
Kooxda Daacish oo Saldhigyo ku leh deegaano ka tirsan Maamulka Puntland ayaa waxaa ay soo bandhigeen Sawiro muujinaya dagaalyahano Cusub oo ku tababaranaya Xero ay ku leeyihiin Dhulka Buuraleyda ah ee Gobolka Bari.
Xaruntan ay Ciidamada ku tababarayaan kooxda Daacish ayaa waxaa loogu Magac darey Hoggaamiyihii hore ee Kooxda Daacish Abuu Bakar Al-Bakhdaadi oo sanadkii hore lagu diley duqeyn uu Mareykanka ka fuliyey Waqooyi galbeed Suuriya.
Xubnahaan ay soo bandhigeen Kooxda Daacish ayaa waxaa ay ku guda jireen tababar,iyaga oo xiran Tuuto,sidoo kalena Wajiyadooda aan la arkeyn.
Si kastaba Bishii September dabayaaqadeedii sanadkii hore ee 2019 ayaa sidan oo kale waxaa ay Daacish-ta Soomaaliya soo bandhigeen dagaalyahano ka tirsan oo sameynaya dhoolatus Ciidan.
Dagaalyahanadaan ay Kooxda Daacish kusoo bandhigeen dhulka buuraleyda ah ee Gobolka Bari ayaa waxaa ay kusoo aadeysaa xilli Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdillaahi Deni uu sheegay inay ka hortegi doonaan weeraro kasta oo kaga yimaada dhinacyada Al-Shabaab iyo Daacish. – Radio Risaala